12 Nzvimbo Dzakanaka Kwekutanga Kwevafambi | Chengetedza Chitima
musha > Famba Europe > 12 Nzvimbo Dzakanaka Kwekutanga Kwevafambi
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Britain, Dzidzisai Kufamba Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Dzidzisa Kufamba Holland, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Switzerland, Chitima Kufamba The Netherlands, Chitima Kufamba UK, Famba Europe
Hushamwari, kufamba, uye yakanaka, izvi 12 vafambi venguva yekutanga vakanakisa’ nzvimbo ndiwo maguta akanakisa ekushanyira muEurope. Kubva muchitima, kuLouvre, kana kuti Dam Square, maguta aya anokwezva mamiriyoni evashanyi gore rose, saka rongedza mabhegi ako uye ubatane nesu parwendo rwekutsvaga runako rwavo.
1. Nzvimbo Dzakanaka Kwekutanga Kwevafambi: Amsterdam
Nzvimbo yakanaka yekupera kwevhiki, Amsterdam ndeimwe 12 nzvimbo dzakanakisa dzekutanga dzevafambi. Amsterdam idiki chaizvo, izvo zvinoita kuti zvive nyore kufamba netsoka, kana nebhasikoro. Pamusoro pe, nzira iyi yekufamba iri nyore kune vekutanga vafambi vasina kujaira kupfuura kune imwe nyika kana kutaurirana nemitauro yekunze..
saka, chete 3 mazuva iwe unogona kuongorora yega yega canal uye kona mune inoyevedza Dutch capital. Gingerbread dzimba muDemark, Dam Square, musika wemaruva, ndokusvetukira pamugero rwendo rwechikepe, uye Anne Frank imba, ingori shoma dzenzvimbo dzaunogona kushanyira. Nepo izvi zvinoita senge refu bhaketi rondedzero, dhizaini yeguta inoenderana nenzvimbo idzi dzakanaka saka chero mushanyi anogona kuvashanyira vese muzororo pfupi. VaDutch vane hushamwari uye vanogamuchira zvikuru uye vachafara kugovera tsika yavo neguta newe.
Nguva yakanaka yekuenda: Chivabvu, kumusika wemaruva wakakurumbira.
Guta remazambuko anoshamisa, nemapindu edoro, Prague inzvimbo yakanaka yekuenda kune vafambi vekutanga. Kana usati wamboenda kuPrague, uchawana guta richinakidza, zvinoshamisa, uye zvine upenyu. Pamusoro pemakereke anoshamisa, uye Old Town square, Prague inotyisa kwekuzorora kwevhiki pfupi, nema pubs, makirabhu, nemapindu edoro epaindi yemanheru.
Uyezve, guta rinozvikudza pamusoro pevafambi, saka, kana uri kufamba wega kuPrague, unogona kugara uchisangana nevamwe vafambi. Nenzira iyi unogona kufemerwa kuronga rwendo runotevera muEurope, kuenda kuVienna kana kuParis, izvo zviri a chitima rwendo kure.
Nguva yakanaka yekuenda: Kudonha.
Kana munhu afunga nezvekufamba kekutanga kuEurope, London inongouya mupfungwa. Guta iri musanganiswa unoshamisa wetsika: Nhaka yeChirungu uye nharaunda dzemazuva ano dzemazuva ano, London Ziso uye Buckingham Palace. Kunyangwe zvingave zvakaoma kuona zvese, London inofanirwa kupa kupera kwevhiki, rwendo rwekuenda kuLondon classic runogoneka.
Classic London inosanganisira kushanyira Buckingham Palace, Shongwe London, uye Kensington Gardens, vashoma ve nzvimbo dzakanakisa muEurope. Pamusoro pe, unogona kunakidzwa nemimhanzi paWest End, achitenderera Notting Hill, uye kuravira kudya kwechirungu chaiko. Pazasi mutsara, London inzvimbo inoshamisa yevafambi venguva yekutanga.
Nguva yakanaka yekuenda: Chirimo nezhizha, kana denga rakasviba uye kunze kuchidziya.
4. Nzvimbo Dzakanaka Kwekutanga Kwevafambi: Florence
Yakapfuma art nhoroondo, nzvimbo dzinoyevedza, nedzimba dzemadzimambo, Florence inzvimbo inoshamisa yekutanga-yekufamba nzvimbo yevanoda art. Guta rekare pakati ndiyo inonyanya kufarirwa chikamu cheFlorence, ine inofema Duomo uye Uffizi gallery isiri kure zvakanyanya. Aya masaiti anoshamisa ari mukati mekufamba chinhambwe cheumwe neumwe, saka iwe unogona nyore kufamba nemumigwagwa yakanaka yeFlorence uye masikweya.
Uyezve, kana iwe usingadi kufamba zvakanyanya, wozokwira Duomo uye Giotto's Bell Tower inopa maonero akanaka eguta rese. saka, unogona kupedza nyore zororo rako muFlorence mukati meguta rekare, uye govana nguva yako pakati pekutenga, unyanzvi, uye chikafu chikuru cheItaly.
Nguva yakanaka yekuenda: Matsutso uye Kudonha.
Chiratidzo cheFrench Riviera, Nice iguta regungwa rakanaka rine mahombekombe ane jecha uye inoshamisa yakasununguka mamiriro. Nice nderimwe remaguta ane mukurumbira muFrance, kune vese vagari venzvimbo nevashanyi. Nepo izvi zvichigona kuita kuti Nice iwedzere kuwanda mumwaka wakakwirira, izvi zvakare zvinoita kuti ive nzvimbo yakanaka kune vekutanga vafambi.
Vafambi venguva yekutanga kuenda kuNice vanogona kunakidzwa neinoyevedza promenade du Paillon, ku castle hill kana guta rekare. Zuva, lively, uye vakazorora, Nice ndiyo yakakwana nzvimbo yezororo muFrance, yakagadzirirwa kuzadzisa zvese zvinodiwa nemufambi. Chikurukuru, ne 300 mazuva ezuva pagore, Nice ndiyo yakanakisa nzvimbo yekuenda kune chero nguva yegore kuti uzorore pamhenderekedzo yegungwa. zvisinei, kana iwe uchifarira art uye nhoroondo, Nice musha kune Chagall uye Matisse mamuseum, pamwe chete neQuarter yekare hongu.
Aunganidze zvinhu, zviri nani kudzidzira bonjour yako nekuti Nice achafara kukukwazisa parwendo rwako rwekutanga zvachose.
Nguva yakanaka yekuenda: Zhizha hongu.
6. Nzvimbo Dzakanaka Kwekutanga Kwevafambi: Vienna
Yakazara nemizinda, machechi, uye mativi ekare, Vienna ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa dzevafambi venguva yekutanga. Iwe unogona kuongorora guta reAustria zvachose netsoka, uye izvi zvinoita kuti Vienna ive rimwe remaguta anonyanya kufarirwa nevanofamba netsoka muEurope. Kubva kuInner Stadt, unogona kuongorora magaraji akawanda, zvitoro zvemhando yepamusoro, zvese zvinokatyamadza muBaroque maitiro uye achaita kuti musoro wako utenderere.
Nemamwe mashoko, Vienna ine zvakawanda zvinoshamisa nhoroondo nzvimbo kuvhakachira, uye mavakirwo acho anoshamisa. Kana iwe uri mudiwa wenhoroondo uye unokoshesa tsika dzakapfuma, iwe uchadanana neVienna pakutanga kuona, uye rwendo rwako rwekutanga kuenda kuVienna ruchava kutanga kwemavhiki akawanda akareba muAustria.
Nguva yakanaka yekuenda: Vienna inonyanya kunaka munguva yechando apo zvose zviri chando uye zvemashiripiti.
Kudanana, zvinonakidza, runako, munhu wese anowira murudo naParis pakutanga kuona, kana kuti totaura rwendo rwekutanga. Guta guru reFrance ndiro pakati pehunyanzvi, fashoni, nhoroondo, uye gastronomy, inopa zvinhu zvinoshamisa zvekuita uye nzvimbo dzekushanyira, kune chero kuravira uye chido.
Zvese zvaunoita muParis kekutanga zvichave zvisingakanganwike. Kubva pakufamba kwekutanga uchitevedza Champs-Elysees kuenda kupikiniki neEiffel Tower uye kushanyira Louvre., rwendo rwako rwekutanga kuenda kuParis harungakanganwiki. Iyo Paris ndiyo yekupedzisira nzvimbo yemufambi wekutanga kuenda kuEurope.
Nguva yakanaka yekuenda: Gore rose.
8. Nzvimbo Dzakanaka Kwekutanga Kwevafambi: Roma
Kufamba-famba cobbled migwagwa, kuColosseum, uye inonaka maritozzo ye dessert inonakidza kuvhurwa kwezuva rekutanga muRoma. Mukuwedzera pakuva nzvimbo yenhoroondo yeRoma yekare, nenzvimbo dzakaita seForum neEmperors’ palace, Roma iguta rakakura kuve neVino del Casa uye inoshamisa Italian pizza.
Uyezve, Roma ine rudo kwazvo uye inokwezva vazhinji vakaroorana murudo. Matanho eSpanish kana Trevi tsime inzvimbo dzakanaka dzemifananidzo yerudo. saka, kana usina kuenda kure kana zvachose kuItaly, ipapo Roma ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekutanga dzevafambi.
Nguva yakanaka yekuenda: Chitubu nekudonha ndiyo nguva yakanakisa yekushanyira vafambi vekutanga kushanyira Roma. Italy yakanaka off-mwaka kuenda kuEurope, uye Kubvumbi ndiyo nguva yakanaka yekuenda.
Kana iwe uine zuva rimwe chete rehunyanzvi hwekufamba, Brussels ndiyo yekupedzisira yekuenda. Waffles, chokoreti, waffles nechokoreti, uye Grand Palace, zvinhu zvitatu zvepamusoro zvekuita muBrussels, kukwana murwendo rwezuva rimwe chete.
Kunyange zvakadaro, kana iwe uchida kuona zvishoma, ipapo iwe uchafara kuona kuti Brussels yakanyatsobatanidzwa; trams, metro, uye mabhazi anokuendesa chero kupi zvako. Imwe mukana unoisa Brussels pane zvakanakisa 12 kekutanga nzvimbo dzevafambi ndeyekuti guta rine mitauro yakawanda. Nemamwe mashoko, unogona kutaura Chirungu, ChiFrench, ChiDutch kana chiGerman kana uri muBrussels uye usanetseka nezvekurasika mukududzira.
Nguva yakanaka yekuenda: Zhizha nechando ndiyo nguva yakanaka yekushanyira Brussels. June mitambo inogadzira mhepo yakanaka muBrussels, nepo Zvita ari mashiripiti eKisimusi.
10. Nzvimbo Dzakanaka Kwekutanga Kwevafambi: kushandiswa
Mudiki, guta rinoyevedza reBruges rakazara nemigero, boutiques, uye Ages akitekicha. Guta reBelgian rinoyevedza inzvimbo inotyisa yekupera kwevhiki, nenguva yakawanda yekuona uye kuzorora. Kuwedzera kune chokoreti kuravira muMarkt Square, kukwira Belfry Tower kune epic guta maonero ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekutanga zuva muBruges.
Iwe unogona kuvhara nzvimbo dzeBruges netsoka, kana mungoro, mukupera kwevhiki kumwe. Mukuwedzera, unogona kusanganisa rwendo rwekuBruges nedzimwe nzvimbo dzekutanga dzevafambi, kufanana neBrussels, uye ita rwendo ruzere rwevhiki imwe kuenda kuEurope. saka, kuti unakidzwe zvizere nerwendo rwako rwekutanga kuBruges, rongedza shangu dzakanaka, bhegi remuchinjikwa, uye kamera yemashiripiti snaps.
Nguva yakanaka yekuenda: Spring ndiyo nguva yakanakisa yekushanyira Bruges. Panguva ino yegore, migero nemikoto yakazara nemaruva anotumbuka, uye mavara.
Iyo inofema yeCologne Cathedral ichakusiya iwe usina remuromo. Nhoroondo yeguta pakati, guta rinovhenekera madekwana, uye cathedral inokwezva chero mufambi wekutanga kuenda kune iri guta rakanakisa reGerman. Cologne inzvimbo inoshamisa yekuenda kuzororo reguta sezvo iwe uchigona kushanyira ese akakosha mamaki mukati 3 mazuva.
Munguva yechando, guta square ndiko kwaunogona kunakidzwa imwe yeakanakisa misika yeKisimusi muEurope. Muzhizha, iwe unogona kuenda kuRheinpark kune maonero akanaka echechi uye pikiniki neRhine river.. Uyezve, unogona kunakidzwa nekuchengetedza kukuru pamapaki anoshamisa, mamiziyamu, uye nezvimwe ne Cologne Card.
Nguva yakanaka yekuenda: Gore rose, asi kunyanya muKisimusi nemuchirimo.
Dresden kuenda kuCologne Zvitima
12. Nzvimbo Dzakanaka Kwekutanga Kwevafambi: Interlaken
Alpine maonero, mafuro manyoro, uye madziva pamwe chete nezvinhu zvemuguta, Interlaken inzvimbo inoshamisa yekuenda kuSwitzerland. Kuva pedyo kweguta kuAlps pamwe chete nekunyaradza kwehupenyu hweguta, pokugara, uye zvekufambisa zvinoita kuti ive imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekutanga dzevafambi.
Kana ukasarudza kuenda kuInterlaken kekutanga, unenge uine rwendo rusingakanganwike kune imwe yenzvimbo dzinodiwa kwazvo munyika. Kunyangwe iwe uchida kukwira makomo kana kunwa Swiss Cacao mangwanani neAlpine maonero, Interlaken ine zvese.
pano pa Chengetedza Chitima, isu tichafara kukubatsira kuronga zororo rako kune idzi 12 vafambi venguva yekutanga vakanakisa’ nzvimbo nechitima.
Iwe unoda here kumisa yedu blog positi "12 Yakanakisa Yekutanga Nguva Yevafambi Nzvimbo" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fbest-first-time-travelers-locations%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kekutanga	FirstTimeTraveler	firsttimetraveleEurope	firsttriptoeurope
Chitima Kufamba China, Dzidzisai Kufamba Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Russia, Chitima Kufamba Switzerland, Chitima Kufamba UK, Famba Europe, Mazano Ekufamba
Rovedza Kufamba France, Dzidzisa Kufamba Holland, Rovedza Kufamba Italia, Famba Europe